nguva yekushandura nyaya dzevashandisi?
Kuru Kushandisa Michina Ndeipi Kuti Ugadzire Mushandisi Nhau?
Ndeipi Kuti Ugadzire Mushandisi Nhau?
Kana iwe wakashanda munzvimbo inonamira seQA, kazhinji ungadai wakasangana neimwe mhando yeabvunzo otomatiki. Ini handireve unit test automation iyo inowanzo kuve yekuvandudza centric chiitiko, asi inoshanda kugamuchirwa bvunzo otomatiki iyo inowanzoitwa neQA kana nyowani fancy basa reSoftware Developer muTest.
Kutanga, ngatitarisei mamwe maitiro uye zvikonzero zvekuve nemuchina wekuyedza uyo unofanirwa kupindura mubvunzo we 'Nei Miedzo Inofanirwa / Isingafanirwe Kuitwa otomatiki'
Iwo anoitwa otomatiki bvunzo dzinofanirwa kudzokororwa uye zvinobuda zvinofanirwa kuenderana mune yega kumhanya kuitira kuti vanogadzira vagone kuvimba nemhedzisiro yemiyedzo. Izvi zvinoreva zvakare kuti isu taisazowanzo gadzira bvunzo kana ichizoitwa kamwe chete; chinosarudzika pane izvi ndechekuti kana urikumhanya kuyedza uchipesana nenhamba yakakura kwazvo yedata, sekutarisa chinongedzo redirection script ine akawanda ma link.
Iwo otomatiki bvunzo dzinofanira kunge dziri kuongorora kutendiswa nenzira kwayo uye nekugona kuona mhedzisiro chaiyo maringe nemhedzisiro inotarisirwa mhedzisiro. Izvi zvinoreva zvakare kuti kana mhedzisiro isingakwanise kutsanangurwa zviri nyore kana otomatiki bvunzo dziri pasi penyaya yezvakatipoteredza izvo zvinogona kukonzeresa manyepo mumhedzisiro yekuyedza, saka bvunzo dzinogona kunge dzisiri dzechokwadi.
Iwo ma automated bvunzo anofanira zvakare kutiponesa nguva. Kana bvunzo yakapusa ichitora maminetsi gumi kuti upedze asi mhedzisiro yakafanana inogona kutariswa mumineti imwe nemawoko, saka zviri nani kuti usashandise bvunzo dzakadai.
Iyo otomatiki bvunzo dzinofanirwa kupa yekuchengetedza mambure kune vanogadzira kuitira kuti chero kutsauka kubva kune yakanaka inoshanda kodhi, semhedzisiro yeshanduko kune yekodhi base, inokurumidza kusimbiswa uye nekumisikidzwa kune vanogadzira.
Nhau Dzinofanira Kuitwa Rini?
Mune yakajairwa sprint, taura kuti pane nyaya nomwe dzinozvipira kubhizimusi uko vashanu vari vakwikwidzi vakanaka kuti vazvigadzire zvichibva pane zvataurwa pamusoro apa. Asi ndeipi nguva yakanakisa yekugadzirisa idzi nyaya? Tinofanira here kunyora zvoga zvoga bvunzo sezvo maficha ari kuvandudzwa? Tinofanira here kumirira kudzamara chimiro chanyatso zadzikiswa tobva tanyora otomatiki bvunzo? Tinofanira kumirira kusvikira kupera kwesprint tobva tagadzirisa nyaya?
Mune zvimwe zviitiko kana nyaya dzichigadziriswa madhigi kana kushandurwa kushoma kana kusimudzira kuchinhu chiripo, zvinobva zvaita pfungwa dzese kunyora bvunzo dzakazvimiririra sezvo chimiro chiri kuchinjiswa nevagadziri. Pangave panogona kunge paine otomatiki bvunzo yeiyo ficha iri kuchinjiswa mauri iwe unongoda tweak script kuti igadzirise shanduko nyowani.
Mune zvimwe zviitiko, kana iyo nyaya iri yekushandisa chinhu chitsva kuchishandiswa, tinoziva sei kuti chigadzirwa chekupedzisira chinoita senge kugona kunyora bvunzo pamberi? Pano, ini handisi kutaura nezve maficha maficha ayo anotsanangura bvunzo dzekugashira pamberi, asi izvo chaizvo zvigadziriso kana selenium bvunzo (kumisikidza miedzo) iyo inopesana neyakaunzwa kodhi.
Chinokosha ndechekuti - chero bvunzo inozoitwa kanopfuura kamwe chete inofanirwa kunge ichishandiswa. Uye ndedzipi miedzo yatichaita kanopfuura kamwe? Kudzokororwa Kwayedza. Uye chii chinonzi regression bvunzo? Miedzo inoona kana iko iko kunyorera kwakadzora mukushanda semhedzisiro yenyowani yekugadzirisa uye maficha.
Asi, iwe unogona chete kunyora zvakanaka otomatiki kudzokorodza bvunzo kupokana nesystem iyo yakagadzikana, inonzwisisika uye inonongedza maererano nemaitiro nemaitiro anozivikanwa nezvakabuda nezvinobuda.
Dambudziko rekuyedza kunyora otomatiki bvunzo kupesana nechinhu sezvo chiri kugadzirirwa iwe unogona kushandisa nguva yakareba uye nesimba rakawanda kunyora zvoga zvinyorwa zvinopesana nechinhu chisina kugadzikana uye chinoenderana neshanduko yenguva dzose panguva yekumhanya. Zvakare, kangani nguva yatakaona nyaya ichipihwa kumhanya uye ichizoburitswa kunze kwekumhanya? Ipapo isu takatambisa nguva kunyora chimwe chinhu chisina kuzviita muhurongwa.
Mamwe masangano anotomisikidza mutemo wakaomarara wekuti nyaya 'haiitwe' kudzamara yangove otomatiki! Tiri kuzomisa yakakosha ficha kuti isunungurwe nekuti QA haina kana kutadza kupa otomatiki munguva nekuda kwezvikonzero zvakasiyana? Kana nyaya haina 'kuitwa' nekuti hatina otomatiki script yekutarisa kuvepo kwebhatani pane peji. Kunyanya?
Chinangwa chakanakisa chekuyedza kushandisa otomatiki kuyedza kudzokorodza uye bvunzo dzekudzokororwa dzinogara dzichimisidzana nenyika inozivikanwa uye dhisitinendi system kuti ikwanise kuona shanduko mune yekutanga, uye kuwana mhedzisiro ine mutsindo kubva kuemuchina bvunzo, ndipo chete kana bvunzo rapera uye wakapfuudza nemaoko kamwe chete, kuti iwe ugone kuenzanisa mhedzisiro yeomuchina unomhanya uchipesana neicho chiitiko kuuraya
Nedudziro iyi, ngano dzinofanirwa kunge dzichigadzirwa (iko kuiswa) mukati mechisimba uye chete kana chimiro chikave chakasimbiswa zvizere nemaoko. Kana nyaya yacho yapera uye yasimbiswa manyore kutanga, ipapo chinhu chakavimbika uye chakatsiga sisitimu iyo yaunogona kugadzira nekunyora otomatiki bvunzo kupikisana. Kana iyo otomatiki bvunzo yaitwa, iyo inowedzerwa kune regression bvunzo suite yekutarisa uye kuona kuremara kwekukanganisa sezvo anotevera maficha ari kugadzirwa.
Apple iPhone 12 Mini bhatiri hupenyu bvunzo: yakanyanya sei kushata?
T-Mobile ikozvino iri kuyedza Android 8 Oreo ye Samsung Galaxy S8 uye S8 +
Maitiro ekushandura iPhone 6s Mhenyu Mapikicha kuGIF kana vhidhiyo
Iyo isingarambike yakanaka Moto 360 (Gen 3) smartwatch yakachipa kupfuura nakare kose
Android 7.1.1 Nougat inotanga kuburukira kuMoto G4 Play mushure mekunonoka kwemwedzi mitanhatu